Mareykanka oo 3 Qof oo Beeraley Ah Ku Dilay Degaanka Daaru-salaam Ee Sh/hoose. – Shabakadda Amiirnuur
November 12, 2017 5:33 am by admin Views: 402
Dayuuradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ayaa 3 qof oo beeraley ah ku duqeeyay degaanka beeraha u saaxiibka ah ee Daaru-salaam habeenkii xalay.
Dad degaan ah ayaa Amiirnuur.com u sheegay iney maqleen hugunka madaafiic culculs kadibna saaka aroortii hore ay ku jarmaadeen dhulka beeraha iyagoo soo arkay meydadka 3 qof oo ay madaafiicdu si daran u wax yeeleeyeen jirkooda.
3-dan qof ayaa xilligii la duqeynayay ku hawlanaa tacbashada beerahooda waxaana tani ay muujineysaa inaanu Mareykanku kala jecleyn dadka Soomaaliyeed, mid la dagaalamaya iyo mid beerihiisa iska falanaya intaba.
Mareykanka ayaa bartamihii sannadkan ku fashilmay isku day uu ku doonayay inuu hawl gal ka fuliyo gudaha degaanka Daarasalaam halkaasoo uu uga cararay xubnaha askari halkaasi looga dilay, waxaana dhacdadaasi kadib uu si caro leh u billaabay xasuuqa shacabka.
Aug 25, 2017, waxa uu degaanka bariire oo aan ka fogeyn Daarasalaam ku gumaaday 10 qof oo beeraley ah walibana ehel wada ahaa kuwaas oo meydadkooda la geeyay magaalada Muqdisho. Taariikhda ay dhacdadaasi ka tagtay waxaa kamid ah in wasiirka warfaafinta Injineer Yariisow uu sheegay in dadka la laayay ay Shabaab ahaayeen!
Dhacdadaas waxaa kasii horeeyay gumaadkii ka dhacay degaanka Sh/Axmad Yare oo hoos taga degmada Jilib halkaasoo ay Mareykanku ku dileen 7 ruux oo isku qoys ahaa taariikhdu markey ahayd Aug 19, 2017, waxaana la xusuustaa in madaxweyne Farmaajo uu sheegay in uu isagu u saxiixay weerarkaasi Mareykanka.